Vatsva veMac neMacBook vashandisi havagone kuisa Linux | Linux Vakapindwa muropa
Vatsva veMac neMacBook vashandisi havagone kuisa Linux
Iyo T2 koprocessor, iyo Apple inogadzirira kune iMac Pro, pamwe neese matsva Mac Mini, MacBook Pro uye MacBook Air mamodheru, padanho rehardware Iyo inovhara kuiswa kweLinux uye mamwe masisitimu anoshanda, kuwedzera kune macOS uye Windows 10.
Naizvozvo, zvinoenderana nemugadziri, zvinokwanisika kuve nechokwadi chekudzivirirwa kwakanaka kwedata remushandisi kubva kumakomputa memory, Pasina kuzviisa panjodzi yekudonha kana kuverenga kusingatenderwe nevanhu vechitatu.
Apple yakashandisa yakasarudzika T2 chip, iyo yakanyatsobatanidzwa nevatungamiriri vakasiyana siyana, kusanganisira system manejimendi maneja uye SSD vatongi.
1 Nezve iyo T2 chip
2 Panguva ino chete Windows 10 inotsigirwa
3 Nzira dzekupfuura zvirambidzo
Nezve iyo T2 chip
Iyo chete software inosimbiswa neApple dijitari siginecha inogona kutakurwa uye ishandiswe pane iyo T2 Hardware Chip. izvo zvakakonzera kutadza kuisa Linux pane aya marudzi emidziyo.
Chip inopa nharaunda yakavharika yakaparadzaniswa zvachose kubva kuhurongwa hukuru, umo mashandiro ane chekuita nekuchengetedza uye kunyorera anoitwa.
Somuenzaniso, padivi reT2, kunyorera data kunoitwa mukuchengetedza, iko kuongorora kweiyo boot maitiro, kuzivikanwa kweminwe uye kumeso.
Paunoyedza kurodha sisitimu inoshanda isiri kusainwa nedhijitari neApple, iyo system inongokutendera iwe kuti uchinjire kune yekudzoreredza uye nzira dzekuongorora.
Panguva imwecheteyo, iyenyowani iMac neMacBook mamodheru ane T2 chip inopa kugona kubhodhi Windows uchishandisa iyo BootCamp utility yakapihwa neApple, iyo inobvumidza iwe kusanganisa macOS neWindows mune imwechete kifaa.
Kana kurodha Windows, kuongorora uchishandisa Microsoft Windows Production CA 2011 chitupa kunotsigirwa.
Chitupa cheMicrosoft Corporation UEFI CA 2011, icho chinoshandiswa kugadzira masiginecha edhijitari evanotora zvekuparadzira Linux, haitsigirwe neApple.
Panguva ino chete Windows 10 inotsigirwa
Kusiyana neyakajairwa masisitimu neEFI Yakachengeteka Boot, zvese zvitupa zvekuongorora pane Apple zvishandiso hazvisi pasi pekushandurwa nemushandisi, izvo zvinoita kuti zvikone kuisa chitupa kuti uone boot yeLinux uye mamwe masisitimu anoshanda kunze kweMacOS neWindows.
Sarudzo, iko kugona kushandisa iyo Apple kutanga kuchengetedzwa utility kunopihwa, inowanikwa kana kurodha pasi kuMacOS Kudzoreredza, iyo inopa sarudzo yekurodha pasina kugonesa nzira yekuchengetedza (»Hapana Chengetedzo« maitiro).
Asi hazvisati zvave kukwanisika kuita Linux mashandiro mune iyi modhi, sezvo iyo T2 chip ichivhara kupinda kweiyo sisitimu yekushandisa kune mamwe masisitimu anodikanwa kuti ishandiswe zvakanaka kwechigadzirwa.
Nzira dzekupfuura zvirambidzo
Zvinoenderana neruzivo rwunopihwa neApple Support, Chishandiso chitsva chekutanga chekuchengetedza chakaburitswa chemakomputa matsva aine yakasanganiswa T2 chip.
Izvi zvinokutendera iwe kuti uchengetedze huwandu hwehurongwa hwekuchengetedzwa kwenzvimbo, kusanganisira kuremadza yakachengeteka bhuti chimiro
Kuwana chirongwa ichi kunogoneka nekutanga mune macOS yekudzoreredza modhi.
Zvisinei, sekutaura kunoita vamwe vashandisi vewebhu, kuremadza kutanga kwakachengeteka hakupe mhinduro yaunoda: kumisikidzwa kweGNU / Linux pamaApple maPC matsva kuchiri kukundikana.
Sekutaura kweGeek Mushandisi
"Parizvino, hazvigoneke kuisa chero chinhu kunze kweWindows 10 pane Apple makomputa ane T2 chip",
Ichi chekuchengetedza chip hachibvumidze vanoisa kuti vaone dhiraidhi yedhizaiti. Apple nerupo yakaita yakasarudzika yeWindows 10 (kana yaiswa uchishandisa Boot Camp).
Imwe nzira inogona kugadzirisa dambudziko iri kuisa Linux pane yekunze USB / Thunderbolt midhiya.
Ndakaedza iyi vhezheni neWindows uye ikashanda. Nekudaro, iyo yekutsigira yemukati yakaramba isingaonekwe kune iyo system.
Pasina mubvunzo Apple yakaita sarudzo dzingangokanganisa ramangwana, nekuti hatigone kukanganwa kuti kuiswa kweT2 kunotadzisa vashandisi kutora michina yavo kugadzirisa, kuongorora kana kungochinja mashandiro ehurdware kunogadzirisa nzvimbo dzisiri idzo dzakapihwa mvumo navo.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Noticias » Vatsva veMac neMacBook vashandisi havagone kuisa Linux
Kurambidzwa kwakabikwa muna 3, 2, 1 ... Kune rimwe divi, kana chinangwa chako chiri chekuisa Linux, zvirinani usatenge Mac ... Kana izvi kana chero. Uye ini ndinokuudza iwe kubva chena Macbook kubva 2.007 neLinux Mint 19.
Tarisa mamiriro eiyo hard drive nerubatsiro rweSmartctl